90 puku Saplings zutere ya na Ala na Aksaray na mgbanye 'Breathe to the Future' | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region68 Aksaray90 puku Saplings Ejiri ụwa gaa na ụwa 'Ahịrị Ruo Ọdịnihu' na Aksaray
12 / 11 / 2019 68 Aksaray, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey
A na-achịkọta saplings 1000 na ala n'okpuru mkpọ iku ume n'ọdịniihu
Na Aksaray, 90 ሺህ Saplings chịkọtara ma mkpọchi ederede 'Breathe to the Future'; Minista oru ubi na oke ohia na usoro nke mgbasa ozi etinyere na Ankara-Kirsehir-Aksaray-Nigde Highway Alayhan Junction gara emume nke Minista Turhan gara, n'okwu ya ebe a, usoro iji nyefee ọrụ, kwuru na ha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ngwa ngwa n'okporo ụzọ a.
Turhan kwuru na ha ga-ewere ọrụ ahụ rụọ ọrụ n'afọ ọzọ wee sị:
“Nke ahụ bụ otu afọ tupu oge ọrụ ya. 330 bụ nnukwu ọrụ nke kilomita. 1,5 nwere ego onu ahia nke ijeri EUR. Mgbe oru ngo a na-aru oru, kilomita 30 n'etiti Ankara na Adana ga-ebelata. Anyi na-aga n’ibe mkpụm ụzọ, na-eme ka ihe isi ike dị mfe ma mee ka ihu na-atọ ọchị maka ọrụ anyị na-enye n'akụkụ niile nke mba anyị. Taa, anyị na-ekere òkè na mkpọsa iji kụọ saplings 11 nde na ala anyị na 90 puku saplings na Aksaray. Dịka ndị ozi, anyị nyere aka site na ị kere osisi nde 2,5 n'okporo ụzọ Ankara-Niğde Highway. Anyi abughi uzo, anyi na enye mmiri okike. N'ihi na anyị maara na ndụ ndụ ndụ na ndụ ndụ bụ ihe nketa kachasị mkpa anyị ga-ahapụrụ ndị ọgbọ anyị n'ọdịnihu. Anyị na-eji ụdị uche a agakwuru atụmatụ niile na ọrụ niile ma lezie anya pụrụ iche iji chebe ọdịdị.
N'echiche a, Turhan kwuru na ha ewerela ụdị nhicha nhicha gburugburu ebe a na-ewu ụlọ nakwa na ha akụla osisi n'usoro kama osisi ọ bụla egbutuworo maka ihe ndị dị mkpa.
Mgbe okwu ndị a gachara, ihe mmemme ahụ kwụsịrị na Turhan na ndị ha na ya so eme ihe ọkụkụ na ịgba ha mmiri.
69 KGM. Sapling 500 Na-echekwa Ala maka Afọ Ntọala
Ihe abụọ dị mkpa na boulevards na Kayseri zutere
Akụrụngwa na akụrụngwa ụlọ dị njikere maka ọdịnihu
Ọrụ 758 na Bursa dị njikere maka ọdịnihu
Ihe ngosi sayensị na-eme ka ọdịnihu dị
KARDEMİR Saplings kesara dịka onyinye maka ndị ọrụ
500 Fidan sitere na Kayseri Transportation Inc.
Usoro maka nbudata mmadụ 5 puku mmadụ na PTT
Evka 3 nwere ume ọhụrụ
Ndị dike Pilot na-egosi na ọ na-egbu ha
Gbọ njem ọha, Eminönü-Alibeyköy Tram Line…
Ankara Kırşehir Aksaray Niğde Highway